धेरैपटक सजिला विषयहरु मञ्चन हुन्छन् । ती हेर्दा पनि रमाइला लाग्छन् । गत मंगलवार विराटनगरमा यस्तै एउटा नाटक हेर्न मिल्यो । जनकपुरको मिथिला नाटय परिषद् (मिनाप) को प्रस्तुती ' बुधियार छौडा आ राक्षस ' अर्थात बुद्धिमान केटो र राक्षस । लोककथाको सामान्य लाग्ने विषय ।
मञ्चको सज्जा पनि सरल । भुमि प्रशासन चोकछेउको खुला मैदानमा भएको नाटक बालबालिकाका लागि थियो । त्यसैले दर्शकमा उनीहरुकै बाहुल्य थियो । डेनिस परियोजना डानिडाको सहयोगमा दुइटा टोलीले नाटक प्रदर्शनको काम पाएका रहेछन् । मिनापले जनकपुर, नारयणी, कोसी र मेचीका विभिन्न जिल्लाका १५ स्थानमा देखाउन यो नाटक र मण्डला थिएटरले पश्चिम नेपालका जिल्लामा देखाउन 'घुम्रिएको कपाल' । त्यसैले मिनाप इटहरीपछि विराटनगर आइपुगेको रहेछ ।
नाटक हेरेपछि मिनापका सूनील मल्लिकसँग केहीबेर कुरा गरियो । धेरैपटक कुनै खास प्रकारको दवाव रहने प्रदर्शनमा यसपटक लोकथा , अनि बालबालिकाका लागि गर्दा त्यस्तो केही छैन । रमाइ-रमाइ गरिरहेका छौ भन्ने उनको भनाइ रमाइलो लाग्यो । हामीकहा अवस्था यस्तो आएको छ, कोही दाता निस्केन भने केही पनि नहुने । नाटक पनि दाताले सघाएमात्रै देखाउने चलन आएछ । यो सोच्दा मन अमीलो हुन्छ । तैपनि विराटनगर गुरुकुल सुस्ताएका बेला मिनापको नाटक हेर्न पाउनु रमाइलै मान्नु पर्‍यो ।
खुला ठाउमा नाटक देखाउ“दा मञ्च मिलाइरहेका कलाकार परैबाट चिन्न सकिन्छ । उनीहरु पालो मिलाएर आफ्नो भागको काम गर्छन् र साथीका लागि मञ्च व्यवस्थापन सघाउँछन् । मैथिली भाषा बुझन असजिलो छैन । हेरियो, अनि केही लेखियो, जसले यो टोलीलाई नाटक प्रदर्शनमा हौसला मिलोस् । हेरियो, लेखियो । जो यस्तो थियो-
चौरमा कौडाको खेल
विराटनगर - धेरैपटक कुनै खास विषय देखाउने तनावले काम गराउँछ । भाषा, अधिकार र सचेतनाका मुद्दा बोकेर हिँड्ने मिथिला नाटय परिषद् (मिनाप) मंगलबार केही फरक देखियो । फरक यस अर्थमा कि कलाकर्मी विराटनगरको खुला चौरमा थिए । दर्शकदीर्घामा स्कुले बालबालिका । भुइँमा एउटा ल्यापटप, साउन्ड मिक्सचर र डिभिडी प्लेयर ।
मञ्च भनेर छुट्याइएको ठाउँमा मिथिला संस्कृति झल्काउने चित्र अंकित एक मान्छे अग्ला छ-सात वटा साना पर्दा छन् । केहीमा रूखको नक्सा पनि कोरिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको एउटा घरबाट दृश्य सुरु हुन्छ । घरको एक्लो लाठे छोरो कम्मरको रातो थैली फुकाउँछ । आँगनमा कौडा फाल्छ, अनि गन्ती गर्छ- 'एक, दुई, तीन, चार ।'
आमा आउँछिन् र कान निमोठछन् । गाई बाँध्न, दुहुन र परालको कुटी काटेर हाल्न लगाउँछिन् । आमा यताउता लागेको देख्यो कि ऊ घरि कौडा खेल्छ घरि दलिनमा झुन्ड्याइएको धनुबाण खेलाउँछ । नेपथ्यबाट चर्को आवाज सुनिन्छ, मानौं कुनै ठूलो संकटको संकेत हो । एउटा बलिष्ठ राक्षस आउँछ । केटो भाग्छ । राक्षस गाईलाई जुरुक्क बोक्छ र स्वादिलो हुने संकेत गर्दै काँधमा बोकेर लैजान्छ । केही बेरपछि मञ्चमा देखिएकी आमालाई अक्क न बक्क भएको छोरो राक्षसले गाई लगेको बताउँछ । आमा बिलौना गर्छिन् ।
अब छोरो गाईको खोजीमा निस्कन्छ । उसले जंगलमा राक्षसकी एउटी सुन्दरी भान्जी भेट्छ । राक्षसले उसलाई बन्धक बनाउँछ । कौडा खेल्ने राक्षसलाई ऊ आफूसँग खेल्न चुनौती दिन्छ । कौडा उसले इनारमा मिल्काउँछ र भन्छ 'मैले जितें ।' राक्षस इनारमा खसेको कौडा हेर्न थाल्दा केटाले उसैलाई त्यसमा लडाइदिन्छ । मिनापको 'बुधियार छौडा आ राक्षस' कथा मञ्चन देखेर बालबालिका ताली पिट्छन् ।
४५ मिनेटको नाटकलाई नारायणी, कोसी र मेचीका १५ स्थानमा मञ्चनको अभियान लिएर निस्केको टोलीका लागि विराटनगर १३ औंमा परेको उल्लेख गर्दै मिनाप अध्यक्ष सुनील मल्लिकले भने, 'यसपटक हाम्रो अभियान लोककथालाई बालबालिकाका लागि देखाउने मात्रै हो । अहिले हामी कुनै विशेष प्रयोजनका अभियानले हुने दबाबमा छैनौं ।' नाटक रमेशरञ्जन झाले लेखेका हुन् । यसमा प्रमेश झा, रवीन्द्र झा, पि्रयंका झा र रीना रिमालले अभिनय गरेका छन् ।
आफैं संगीत संयोजन गरेका सुनीलले भने, 'हामीले सडक नाटक र मञ्चमा गरिने नाटकमा धेरै अन्तर हुँदोरहेछ । खुलामा गर्दा प्रकाशको खेल गर्न नपाइने, सबै खुला खुला हुने ।' राजधानीको रसियन कल्चर सेन्टरबाट थालेर महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, सुनसरी र मोरङसम्म आइपुग्दा मैथिली भाषाको यो नाटकलाई राम्रो प्रतिक्रिया आएको उनले बताए । झापाको भद्रपुरमा मञ्चनपछि जनकपुर पुगेर यसपटकको अभियानले विश्राम लिनेछ । 'दन्त्यकथालाई कसरी नाटय रूपान्तर गर्न सकिन्छ भन्ने यो अभ्यास पनि हो,' सुनीलले भने ।
प्रकाशित मिति: २०६८ पुस १३
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:26 PM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:17 PM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:19 PM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:01 PM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:18 PM2comments:
मोटरसाइकलमा हिँडेका एक दर्जनको जमात जब बरगाछीबाट पूर्व लाग्छ, केही पसले झटपट सटरहरू बन्द गर्छन् । हातहातमा चम्किला तरबार छन् त निधारमा रुमाल बाँधेका छन् । भन्छन्, 'हेर न, फेरि कता झगडा गरेर आएछन् गुन्डाहरू । यता आए के गर्लान् डाँकाहरूले ।' उनीहरूका पछिपछि आएको बसको छतमा हेरेपछि मात्रै सत्यता खुल्छ ।
तरबार बोकेर हिँडेकाको जमातलाई बसको छतबाट क्यामेराले पछ्याइरहेको छ । केहीअघि लागेपछि मोटर साइकलको अगाडि एउटा मारुती भ्यान देखिन्छ । भ्यानको अगाडि सिटमा बायाँपट्टी 'बाबा' बसेका छन् । कुर्ता-पाइजामा र इस्टकोट लगाएका, लामोलामो कपाल भएका । हावाले अनुहारमा ल्याएको कपाल घरिघरि अनुहार छेल्छ । उनी पन्छाउँछन् । घिनाघाटस्थित जनता क्याम्पसको हातामा पुगेपछि दुई निर्देशकमध्येका इन्द्र परियार चिच्याउँछन्, 'कट कट, यो अगाडि भ्यान रोकेर हिँडेको सिन छ । यो सिन रिटेक गरौं ।'
सहरका गुन्डा नाइके बाबाका भाइलाई कसैले कुटेर पठाएको छ । त्यो कुट्नेलाई तह लगाउन बाबा आफ्ना भाइलाई लिएर कलेज आएका छन् । क्यामेराम्यान अबुद्ध खनाल संकेत गर्छन्, 'कलेज ग्राउन्डमा बाबाको डिस्टेन्स र क्लोज दुई सट लिनुपर्छ ।' यो फिचर फिल्म 'स्नेह' को छायांकनका क्रम हो । आधा दर्जन रिफ्लेक्टर ठड्याइन्छ । बाबाको अनुहार उज्यालो जो देखाउनुछ । गाडीबाट ओर्लिएपछि बाबा दलबलका अगाडि आउँछन् । कलेजलाई राम्ररी हेरेपछि चिच्याउँछन्, 'सुनसान । बाबा आएपछि कलेज सुनसान ।'
दृश्य फेरि क्लोज सटमा छायांकन गरिन्छ । 'बाबाको भाइलाई हात लगाउने को हो ? त्यसलाई ज्यानको माया छैन ? म तीन गन्छु, बाहिर निस्की,' चिच्याएका बाबाको अनुहारका भाव फेरिन्छन्, 'लेडिज ? बाबाको भाइलाई पिट्ने लेडिज ? आखिर
किन ?' बाबा बनेका राजकुमार साहले थाहा पाउँछन्— उनका भाइ कलेजमा लागूऔषध बेच्छन् । भेद खुल्छ । त्यसैले पिटाइ खाएका हुन् । उनलाई फोन आउँछ- 'जिविसमा टेन्डरको टाइम भएको छ ।' महिलालाई दुव्र्यवहार नगर्ने र दुव्र्यसनीलाई मन नपराउने अचम्मका यी गुन्डानाइके कलेजबाट त्यतिकै बाहिरिन्छन् ।
विकास चापागाईं, प्रीति शाही, देशभक्त खनाल, मिलन नेपाली, सीता न्यौपाने, जानकी तामाङ, भीम कुँवर र गजेन्द्र खतिवडा लगायत कलाकारको अभिनय रहने 'स्नेह' को सुटिङ डेढ महिनामा सिध्याउने लक्ष्य रहेको निर्देशक परियारले बताए । विराटनगरमा लामो समय सानो पर्दाका फिल्म र रंगमञ्चसँग जोडिएका परियार र विनोद पुडासैनीले यो फिल्म निर्देशन गरिरहेका छन् । देवी पाण्डे निर्माता रहेको फिल्मका लागि सुनसरी, मोरङ र झापाका विभिन्न स्थानमा छायांकन गरिने भएको छ ।
'सुटिङ थालेको बल्ल चारपाँच दिन भयो,' परियारले भने, 'युनिट र मौसम दुवैले साथ दिएको छ । अहिलेसम्म करिब १५ प्रतिशत सुटिङ भयो ।'
आफैंले लेखेको कथाबारे उनले भने, 'प्रेमकथा भए पनि अहिलेका सामाजिक विसंगतिलाई यो फिल्मको कथाले समेट्छ ।'
(कान्तिपुर दैनिक, कला र शैली पृष्ठ, प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर २० )
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 3:54 PM 1 comment:
साहित्य, संगीत र चित्र
'भूगोलका सीमा रेखाहरूले मात्रै मुलुक सिंगो हुने होइन । सिंगो हुनका लागि जनताका विविधतायुक्त मन जोडिनुपर्छ । एक-अर्काका संस्कृतिको प्रवर्द्धन र भावनाको सम्मान गरिनुपर्छ ।' साहित्यमा पनि उत्तिकै दख्खल छवि बनाएका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले यस्तो भनिरहँदा सभाहल तालीले गुञ्जायमान भयो । 'राष्ट्र बलियो हुन कला, संस्कृति र भाषासाहित्य बलियो हुनुपर्छ । राजनीतिले ल्याएको विभाजनलाई साहित्यले जोड्नुपर्छ,' उनी भन्दै थिए, 'अहिले हामी त्यही अभियानमा छौं ।'
नेपाली कला साहित्य डटकम प्रतिष्ठान र पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानले गरेको 'मेरो राष्ट्र मेरो ध्येयः सिर्जना उत्सव' का लागि भेला भएका साहित्य पारखीले एक पटक विराटनगर फेरि सिर्जनामय अनुभव गरे । कार्यक्रमको भिन्न विशेषता के थियो भने साहित्यिक जमघटमा सांगीतिक सिर्जनाको प्रस्तुति र चित्र प्रदर्शनी एकसाथ भइरहेको थियो । साहित्य, संगीत र चित्रकलालाई एकसाथ अघि बढाउने अभियान अन्तर्गत सिर्जना उत्सव गरिएको थियो, सुकर्म ब्यान्डले 'मेरा राष्ट्र मेरो ध्येय' शीर्षकमा हालै कम्पोज क्लासिकल धुनसँगै तीनवटा अरू सेमी क्लासिकल धुनहरू पस्किए । डा. ध्रुवेशचन्द्र रेग्मीको सितार, श्याम नेपालीको सारंगी र प्रमोद उपाध्यायको तबलाबाट निस्केको सांगीतिक सिर्जना विराटनगरबासीका लागि भिन्न स्वाद थियो ।
'अब तिहारलाई पनि जोडौं है,' झन्डै ४५ मिनेटको प्रस्तुतिमा ध्रुवेशले 'देउसी-भैली' धुनका लागि श्याम र प्रमोदलाई आँखाले संकेत गरेपछि कार्यक्रम हलमा झन् खुसीको तरंग फैलियो । यसपछि गुन्जिएको 'देउसी रे...' र 'तिहारै आयो लौ झिलिमिली...'लाई दर्शकले खुलेर साथ दिए । कार्यक्रमको अर्को आकर्षण थियो कवि कृष्णभूषण बल । यस वर्षको योगेश्वर कलासाहित्य पुरस्कार ग्रहणका लागि स्टेज उक्लेका उनले 'नदी किनारको जून' शीर्षकको कविता पनि सुनाए । कवि-गीतकार तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दिनेश अधिकारीबाट १५ हजार रुपैयाँ सहितको पुरस्कार थापेपछि बलले नै कविता वाचन शृंखला उद्घाटन गरेका थिए, उनलाई पछ्याउँदै उषा शेरचन, डा. विमल कोइराला, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, विमल वैद्य, सुदीप पाखि्रन, ठाकुर बेलबासे, चंकी श्रेष्ठ, राधिका गुरागाईं, मणि लोहनी, नवराज सुब्बा, अरुणा वैद्य, रिता खत्री, कविराज पोखरेल, बद्री पलिखे, गण्डकी पुत्र, मीनकुमार नवोदित, मधु पोखरेल, शुभलक्ष्मी लम्साल, शिवनारायण पण्डित, दीपक शम्चु, पुनम अधिकारी, कोरियाली कवि किम यिङ लगायतले कविता सुनाए ।
पुनम, दीपक र शिवनारायण गत साता विराटनगरमै आयोजित प्रतियोगितात्मक कविता गोष्ठीमा क्रमशः प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएका थिए, सिर्जना उत्सवकै अवसर पारेर उनीहरूले पनि पुरस्कार थापे । भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलको समेत आतिथ्य रहेको कार्यक्रमको तेस्रो आकर्षण थियो, भित्तामा सजिएका चित्रहरू । 'चरा चित्र' मा स्थापित छवि बनाएका जीवनाथ पोखरेलका चित्रहरू साँच्चिकै लोभलाग्दा थिए । उनले सीमसार क्षेत्रका चरा र दृश्यलाई क्यानभासमा उतारेका थिए, कविता सुनिरहँदा दर्शकहरू बारम्बार उनका चित्रतिर नजर डुलाउँथे । वाचित कवितामाथि समालोचक डा. ज्ञानु पाण्डेले र कृष्णभूषणको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि डा. कुमार कोइरालाले बोलेका थिए । आयोजक दुई संस्थाका अध्यक्षहरू मोमिला र विवश पोखरेल चाहिँ व्यवस्थापनको चुस्ततामै केन्दि्रत थिए । निर्धारित ६ घन्टामै सकिएको कार्यक्रमले 'चित्र, साहित्य र संगीत'लाई एउटै थलोमा उभ्याएर 'राष्ट्र र राष्ट्रियता'को पक्षमा चेतना निर्माण गर्न सघाएको मोमिलाले दाबी गरिन्, विवशले चाहिँ पहिलो पटक भिन्न स्वादको कार्यक्रम आफ्नो थलोमा गर्न पाउँदा खुसी प्रकट गरे ।
(कान्तिपुर/कला र शैली पृष्ठमा ०६८ कात्तिक ०७ सोमबार प्रकाशित )
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 1:39 PM No comments:
मालबाहकका पुच्छर चहारेर
टाटाका ट्रक होस् हजार बीसका लागुन् नयाँ टायर
भारी होस् दस या कि नौ टन मिलोस् बाटो सफा डामर
साथी हुन् कविजी चलोस् सुकविता शृंगारको सागर
त्यो आनन्द सरी कहीँ अरू कुनै आनन्द के हुन्छ र ?
(रमेश खकुरेलको बिदाइ कवितासंग्रहबाट)
'राष्ट्रपति डाक्टर, प्रधानमन्त्री पनि डाक्टर भए, चिन्ता नमान्नु अब राष्ट्रको उपचार चाँडै हुन्छ' को १ ख १६६९ नम्बरको ट्रकको पुछारमा यस्तो लेखिएको छ । ट्रकका पछिपछि नजर दौडाउने एक दशकदेखिको सनकलाई जब पुस्तकाकार रूप दिइयो, उनले नसमेटेको एउटा अंशअंकित तस्बिर भेटियो । त्यही ट्रकको पुछारको । जसमा त्यसमा यस्तो पनि छ -
जय शिवशंकर भोला
हाम्रो नयाँ संविधान कस्तो होला
कसरी जोगाउने होला ।।
सबैलाई थाहा छ- मुलुक हाँक्ने मुख्य जिम्मेवारीमा दुई व्यक्ति डाक्टर हुँदैमा देशले सजिलै उपचार पाउने अवस्था छैन । तर, जनताले अपेक्षा राख्न पाउँछन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथिका अपेक्षाका पंक्ति पनि लेखिए । 'ट्रक साहित्य : संकलित सिर्जनाहरू' पुस्तकका सम्पादक सुविद गुरागाइँ भन्छन्, 'त्यो ट्रक मैले धरानमा देखें, रगंरोगन चलिरहेको थियो । असोज १ देखि अहिले सडकमा कुदिरहेको होला ।' उनको संकलन सनकलाई फोटोग्राफीमा नवीन गड्तौलाले सघाएपछि यात्रा पुस्तकसम्म आइपुगेको हो । जोडी जता पुग्छ, ट्रकका पुछारमा लेखेका कुरामा नयाँपन के छ भन्दै खोज्छ । ट्रक, अनि त्यसमा लेखिएका शब्द लहर ।
हिमाल छ पहाड छ, विभिन्न ताल छ,
बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धिको अनिकाल छ ।।
दशकअघि ना४ख ६२९० नम्बरको ट्रकका पछाडि लेखिएका यी हरफले संकलनको जिज्ञासा फुरेको सुनाएका गुरागाइँ इटहरीमा रहेर शिक्षण र पत्रकारिता गर्छन् । केही वर्ष राजधानी बसेर पत्रकारिता गरेपछि घर फिरेर केही नयाँ गर्ने सोच राख्ने उनी सामान्य रिपोर्टिङको दिनचर्याभन्दा भिन्न गर्न रुचाउँछन् । पृथक् गर्न खोज्ने बानीले नै उनलाई धेरैपटक एक्लो बनाउँछ ।
सामान्य मान्छेका दिनचर्यादेखि माया-प्रीति, विरह, परिवार, समाज, आस्था, मोजमज्जा, ठट्टा, जिम्मेवारी, चिन्ता, दिक्दारी, महँगी, ट्राफिक नियम, सडकका जोखिम, देशप्रेम, राजनीति, पत्रकारिता, पर्यटन, सावधानी र जानकारी । गुरागाइँ भन्छन् 'मान्छेले देख्ने, भोग्ने, सोच्ने र बेहोर्ने धरै खालका भाव ट्रकमा भेटिन्छन् । जति खोज्दै गयो, त्यति रमाइलो रहेछ ।' उनले ना३ख ६०२४, बा २ ख ७४६५ र ना २ ख ७२६४ नम्बरका तीनवटा ट्रकमा एउटै सायरी भेट्टाए ।
उकाली होस् या ओराली होस्
बीचमा एउटा ससुराली होस्
गोरी होस् या काली होस्
ससुरालीमा एउटा साली होस् ।।
सामान ढुवानी गर्दै एक ठाउँबाट अर्को गन्तव्यका लागि हिँड्ने सवारी थरीथरीको बाटोमा यात्रा गर्छ । चालक, सहचालक, मिस्त्री र डेन्टिङ-पेन्टिङ गर्नेहरूका मानसिकता एकै खालका हुँदैनन् । उनीहरूका मुकाम र बाटामा रोकिने ठाउँ बसचालक र यात्रुभन्दा फरक छन् । स्टेरिङ, ब्रेक, बाटाका घुम्ती र यात्रारत जीवनका भोगाइ आफैंमा नौला छन् । ट्रक साहित्य तिनै भाषा बोल्छ । गुरागाईको पुस्तकमा ३ सय १५ वटा मुक्तक, कविता, सायरी, मननीय भनाइ र विभिन्न अभिव्यक्ति समेटिएका छन् । साथमा सवारीसँग सरोकार राख्ने चालक, पेन्टर र ट्राफिक प्रहरीका भनाइ आफ्नै पाराका छन् । वीरगन्जका पेन्टर सीताराम साहले भनेका छन्, 'म पढेको छैन, सायरी आउँदैन । तपाई जस्तो दिनुहुन्छ, म त्यस्तै लेखिदिन्छु ।' उनका भनाइमा सवारीका पछाडि लेख्नेहरू आफैंले आफ्ना भावना लेखेको भन्दैन । गाडी तयार पारेपछि साहुजी चालक र सहचालक खोज्छन् । अर्काको गाडीमा कर्मचारी भएर आएपछि यी दुईले सके थप्लान्, नसके जहाँ गाडीको डेन्टिङ-पेन्टिङ गरिन्छ, सर्जक अमूक हुन्छ । २०३० सालदेखि सवारीचालक रामहरि केसी अहिले १५ वर्षअघिबाट आफ्नै ट्रक कुदाउँछन् । उनले भनेका छन्, 'घर छाडेर बाहिर हिँड्दा अरूले भनेजस्तो रमाइलो हुँदैन । यो लाइनमा हिँड्नेहरू सबै ठीक छन् भन्न सकिन्न । कतिको गाडी कुदाउने चाल ठीक हुँदैन, कसैको बोलीवचन मीठो हुँदैन । तर, सबै खराब हुन्छन् भन्ने होइन ।'
कवि कृष्णभूषण वलका विचारमा ट्रकमा भेटिने शब्दजाल साहित्यमा नयाँ स्वाद हुन् । भन्छन्, 'कसले लेख्छ भन्ने थाहा हुँदैन । तर, धेरैमा मन छुने सामयिकताका लेखाइ भेटिन्छन् ।' कलाकार विक्रम श्रीका भनाइमा ट्रकमा मुक्तक र सायरी मात्र होइन कलाको पुरातन इतिहास नै भेटिन्छ । यसका उपयोग गरिने रंग र चित्रले विभिन्न समय र भावलाई बोल्छ । कवि मनु मञ्जिल भन्छन्, 'ट्रक साहित्यमा समेटिएका भावहरूमा जीवनका विविधता छन् ।' उनको भनाइमा कतै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त कतै भूपी शेरचनका शब्द पनि पैंचो लिइएका भेटिन्छन् । चिन्नेहरूले फलानोका कविता अंश भनिदेलान् तर, धेरै मालबाहकका पछिल्तिर ना४ख २५८२ र ना४ख ४८३६ मा लेखिएजस्तो सुर भेटिन्छ ।
बिन्दास गाडी बिन्दास टुर
लभ्ली ड्राइभर आफ्नै सुर ।।
(२०६८ कात्तिक ५ शनिवार/कान्तिपुर कोसेली पृष्ठ घ)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:09 PM No comments:
एउटा प्रयोगमाथि रूची राख्नेहरूले इन्टरनेटको समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भेटघाट नियमित बनाए । एक-अर्काको 'स्टाटस' मा प्रतिक्रिया लेख्दै । आपसमा लेखाइ कसरी सुधार्ने र साहित्य सिर्जनाका विधाहरूमा दख्खल कसरी बनाउनेमा ध्यान केन्द्रीत गरे । रहरलाई पुस्तकाकार रूप कसले दिने भन्नेमा विराटनगर रहेर कलम चलाउँदै गरेका टेकेन्द्र अधिकारी अघि सरे ।
नटेरेकै चाम्रो भो, नभेटेकै राम्रो भो
दुनियाँले नबुझ्ने, मायाप्रीति हाम्रो भो
फुट्यो बाँध, रूखो बोलीले ।।
'यो एकदमै नयाँ विधा भएकाले पहिलो काम आफैं थाल्ने रहर लाग्यो,' उनले भने, 'विधाका नाम सुन्नेहरू पहिले अचम्म मान्छन् अनि अलिपछि त्यसको गहिराइ नापजोख गर्छन् ।' यो नौलो विधा रह्यो, गेडी ।'हुँदैन यसरी । तीन अक्षरको भए राम्रो होला । बरु गेडीका भन्नुस्' प्राडा टंक न्यौपानेले सल्लाह दिए । अधिकारी मानेनन् । तर्क अघि सारे, नेपाली भाषामा मौलिक नयाँ विधा हो, नाम गेडी नै भएको ठीक । फेसबुके समूहमा चर्चा निरन्तर चल्यो । रोजगारी र अध्ययन सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहेकाको जमातले अधिकारीलाई यसरी हौसला दियो, उनले डेढ महिनामै सयवटा गेडी तयार पारे । रोजगारीका लागि विदेश हान्निएकाहरूलाई गेडीमा यसरी उतारे ।
किसानको छोरो म, विदेशमा बस्या छु
पराईको भूमिमा, काममा घुँडा धस्या'छु
बाध्यताले पार्‍यो ठहरै ।।
यी युवा सर्जकलाई हौस्याउनेमध्येकी संखुवासभाको शीतलपाटी-६ की मनु लोहोरुङ केही वर्षदेखि इजरायलमा छिन् । उनले गेडीलाई अथ्र्याइन् 'सानो आकारको दाना अथवा फलहरूको बीउ । संवाद र नेपाली साहित्यको सानो तर महत्त्वपूर्ण । यसको संरचना र भावतत्वले नामको पूर्णता दिन्छ ।' उनका भनाइमा गेडीका विशेषता यसको संरचनात्मक पक्ष हो । टेकेन्द्र गेडीमा बारम्बार म्याद थपिए पनि नबनेको संविधानको अवस्था लेख्छन् ।
गोरु पनि ब्याएन, खुसी पनि ल्याएन
शान्ति कता हरायो, त्यसले टुंगो पाएन
संविधान, पर्‍यो भीरैमा ।।
थाइल्यान्डको बैंककमा रहेका खगेन्द्र पन्धाक लिम्बूले गेडी परिकल्पना गरे । गएको वैशाख ९ गते फेसबुकमार्फत उनले गेडी विधा परिकल्पना सार्वजनिक गरे । उनीसँग समाजिक सञ्जालमा जोडिएकाहरूले आ-आफ्नै पारामा अर्थ लगाए । लेख्न थाले । साइट, ब्लग र पत्रिकामा प्रकाशनको प्रयास थालियो । कतिले यसलाई नक्कल पनि भनिदिए । उनका शब्दमा कुनै ठेट लोकगीतको नक्कल होइन । तर, यसको संरचनाले झल्को दिन्छ । किनभने नेपाली मौलिकता र नश्ल यसको पृष्ठभूमि हो । पन्धाकका भनाइमा यो संरचनाको हिसाबले चतुस्र्पदीय आन्तरीक, मध्यानुप्रासीय तथा अन्त्यानुप्रासीय गेयात्मक लेखन विधा हो । प्रथम र दोस्रो पदको अन्त्यानुप्रास तथा तेस्रो र चौथो पदको अन्त्यानुप्रास मिल्नुपर्छ । उनका आफ्नै सूत्र र तिनका हिसाब छन् । प्रथम पद उठान, दोस्रो कथन, तेस्रो थेगो र चौथो बिट । संग्रहको जमर्कोलाई साकार बनाएर टेकेन्द्रले 'सय पाइला गेडीका' मा प्रेम, विरह, गाउँघर, जागिरे जीवन राम्रैसँग उतारेका छन् । दिक्कलाग्दो राजनीति र भ्रष्टाचारलाई पनि उनले तीखो व्यंग्य कसेका छन् ।
देश पछि पर्दै छ, कुमतिले साँचो हो
तल-तल झर्दै छ, सुमतिको खाँचो भो
मिलीजुली, भुँडी भरौँ न ।।
नेपाली विषयको प्राध्यापनमा अढाई दशक बिताइसकेका कृष्ण वस्ती भन्छन्, 'टेकेन्द्रका गेडी अनौठा छन् ।' वस्तीका शब्दमा 'गेडीको धर्म र मर्ममा कविताका किरणहरू सबैजसो अभिव्यक्तिमा पाइनु प्रशंसायोग्य छ ।' उनलाई मन परेको गेडी यस्तो छः
डाँडामाथि द्यौराली, हावा चल्यो सिरिरी
मायालुले बोलाको, बजाउँदै पिपिरी
माया भेटे, मनै शीतल ।।
हङकङ बस्ने विष्णुनन्द चाम्लिङ भन्छन् 'म साहित्यकार होइन, न म गीतको विशेषज्ञ तर, गेडीलाई लघु गीत भन्न मन लाग्छ ।' ४३ वर्षअघि हिमाली साहित्यमार्फत् दिउल काव्यको प्रस्ताव गरेको सम्झेका भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल गेडी पुस्ततकाकार स्वरूपमा देख्न पाएकोमा हषिर्त छन् । पहिलो कृतिमै प्रयोगपरक लेखन समेटेका अधिकारी भन्छन्, 'यो फेसबुकमा सिर्जनशीलहरूलाई साथी बनाउन सकेको परिणाम हो । उनीहरू हौस्याइरहे । म लेखिरहे ।' सयवटा उनका लेखोट पुस्तकमा नेपाली युनिकोड फन्टमा छापिएका छन् । किन ? 'युनिकोड तिनै फेसबुक साथीहरूलाई ध्यानमा राखेर हो । संग्रह डिजिटल फाइल पठाउँदा उनीहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हो ।'
(०६८ भदौ ३१ को कान्तिपुर कोसेलीमा प्रकाशित)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:38 PM No comments: